Warar Goosgoos ah: Ruunkinet 15/12/2009
Jen. Qeybdiid oo xil wasiir loo magacaabay
Digreeto ka soo baxday xafiiska raysal wasaaraha dowladda Soomaaliya ayaa maanta wasiir loogu magacaabay taliyihii hore ee ciidamada booliska dowladda Soomaliya Jeneraal Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid.
Md. Cabdi Qeybdiid, ayaa loo magacaabay wasiirka macdanta iyo biyaha dowladda Soomaaliya iyadoo wasiirkii xilkaas hayay Max'ed C/llaahi Oomaar isna loo magacaabay booskii uu ka geeriyooday ALLAHA u raxmadee wasiirkii hore ee tacliinta iyo hiddaha sare dowladda kmg ah ee Soomaaliya.
Munaasabaddaas oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, ayaa waxa wasiirka cusub Jeneraal Qeybdiid, dhaariyay wasiirka garsoorka dowladda Soomaaliya C/raxmaan Max'ud Faarax Janaqow.
Raysal wasaare xigeenka dowladda Soomaaliya Prof. C/raxmaan Ibbi, ayaa saxaafadda u aqriyay digreetada lagu magacaabay wasiir Qeybdiid.
Burcad dishay dad rayid ah gudaha Muqdisho
Afar ruux ayaa xalay siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Waaberi ee gobalka Banadir.
Dadka la dilay oo laba kamid ah ay ahayeen ganacsato ku sugneyd goobtooda ganacsi, ayaa waxa dilay kooxo AK 47 ku hubeysnaa kuwaas oo sidoo kale dhac u geystay xaruntooda ganacsi, sida ay dad deegaanka ahi sheegeen.
Kooxihii dilka iyo dhaca geystay, ayaa baxsaday markii dhacdadaas foosha xun ay sameeyeen ka dib.
Sidoo kale rag ku hubeysanaa bastoolado ayaa laba nin oo kale ku dilay isla degmada laba ruux oo kale kuwaas oo aan la aqoon sababta loo dillay.
Waaberi waxay ka mid tahay deegaanada nabdoon ee ay dowladda Soomaaliya ka arrimiso, waxana dilalkan uu qal qal ku abuuray dadka deegaanka.
Dhanka kale dagaallo ka dhacayay Muqdisho maalimihii la soo dhaafay, ayaa waxay sababeen geerida dad ka badan 10 ruux dhaawaca tiro intaas ka badan.
Duqeymo xoogan ayaa xalay waxa laga maqlaayay qeybo ka mid ah xaafado ka tirsan degmoyinka Hodan iyo Dayniile halkaas oo ay isku weydaarsanayen duqeymaha ciidamada AMISOM iyo xoogaga ka soo horjeeda oo weeraro ku soo qaaday fariisimada ciidamadas ay ku leeyihiin Muqdisho.
Qeybo ka mid ah degmada Dayniile, ayay dadku saaka ka qaxayeen, iyagoo ka baqaya in duqeymaha ka dhacaayay 24kii saac ee la soo dhaafay deegaanadaas ay waxyeelleyso.
Burcad badeed ku dagaallamay Hobyo
Hal ruux ayaa ku dhintay ka dib markii iska hor imaad kooban uu dhex maray kooxo burcad badeed ah gudaha degmada Hobyo ee gobalka Mudug shalay galinkii dambe.
Dad ku sugan degmada xeebta ah ee Hobyo, ayaa sheegay in iska hor imaadka uu ka bilowday ka dib markii mid ka mid ah kooxaha burcad badeedda lagu weeraray gudaha degmada xilli uu bartamah magaalada maraayay,waxan u soo gurmaday qaar ka mid ah saaxiibadiis, kuwaas oo iyana rasaaseeyay kooxdii kale ee burcad badeeda ahaa.
Lama oga sababta keentay in ay burcaddu is rasaaseeyaan.
Iska hor imaadka dhex maray labada dhinac ayaa waxa ku nafwaayay hal ruux oo dadka deegaanka ah kaas oo aanu ka mid aheyn kooxihii dagaallamaayay.
Odayasha dhaqanka ee degmada ayaa isku dayaya inay xiisadda qaboojiyaan.
Ma ahan markii ugu horeysay ee burcad badeeddu uu gacan ka hadal dhex maro, dhowr jeer oo hore ayay isku qilaafeen lacago madax furasho ah oo ay qaateen.
Qarax caruur ku laayay Ballanbal
Lix ruux oo caruur ah misena ka kooban hal qoys, ayaa ku dhintay qarax ka dhacay degmada xadka Itoobiya iyo Soomaaliya ku taal ee Ballanballe.
Qaraxa, ayaa waxa uu ahaa miino dhulka lagu aasay kal hore, waxana uu qarxay xilli carrurtan ay karsaneen raashiin tas oo la sheegay in kuleylkii dabka uu qaraxa sababay.
Guddoomiyaha degmada Ballanballe, ayaa sheegay in carruurtan, hooyadood iyo aabahooda ay ahaayeen kuwa reer guuraa ah oo ka soo cararay deegaano gobalka Galgaduud ka tirsan oo abaaro ka jiray.
Qaraxa musiibo ee dhacay, ayaa waxa ka badbaaday hooyadii dhashay ilmahan, aabihii iyo hal gabar oo kaliya.
Qaraxyada nuucani ah ayaa waxay yihiin kuwa aan ugub ku aheyn dalka Soomaaliya, oo aan dowlad adag helin muddo ka badan 18 sano.
Boosaaso oo banaan bax ay ka dhaceen
Banaanbaxo waaweyn oo looga soo horjeedo amaan darrida ka soo cusboonaatay magaalooyinka waaweyn ee Puntland, ayaa maanta waxa ay ka dhaceen magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari halkaas oo sidoo kale ay xalay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada amaanka Boosaaso markii miino dhulka la galiyay lala eegtay.
Dadka dibax baxyada sameynaayay oo mararka qaar rabshado ku dabaqaayay dibax baxyadooda ayaa waxay wateen boorar ay ku diidan yihiin in amaan darrida ay sii socoto.
Dibax baxyaasha qaar, ayaa waxay dalbanayeen in ay gobalka isaga tagaan dadka aan heyb ahaan halkaa ka soo jeedin.
Ciidamo dhowr ah oo ka tirsan kuwa maamulka ayaa isku dayay inanay dibad baxu faraha ka bixin.
Qaraxii xalay ka dhacay Boosaaso oo lala eegtay gaariga ciidamada amaanka, ayaa waxa ku nafwaayay afar ka tirsan ciidamadii amaanka iyo dhaawaca tiro intaas ka badan.
Weerarada nuucaani ah ee ka dhanka ah amaanka, ayaa ku soo noq noqday Puntland, xilli maamulka uu wali xooga saarayo wax ka qabashada amaanka.
Ma jirto cid illaa iyo hadda sheegatay mas'uuliyadda weerarada Puntland ka dhacaya.